Kismaayo News » 22 sanadood kadib geeridii Maxamed Siyaad Barre
22 sanadood kadib geeridii Maxamed Siyaad Barre
Kn: Maanta oo bisha Janaayo tahay 2, waxay ku beegantahay 22 guuradii ka soo wareegtay geeridii ku timid madaxweynihii ugu danbeeyay ee u taliya Soomaaliya oo nabad ah, Maxamed Siyaad Barre.
Labadii Janaayo 1995 ayuu Maxamed Siyaad ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria oo si magangalyo ahaan ah ugu noolaa kadib markii ay xukunka ka tuureen Jabhadihii SS-ta ee qaab beeleedka u hubaysnaa, kadibna ayagii isu qaatay ee Soomaaliya dhaxalsiiyay hoogga iyo halaagga ilaa iyo hadda laga soo waaqsan la’yahay.
Siyaad Barre oo Muqdisho isaga baxay 26-kii Janaayo 1991 ayay dad badan aaminsanyihiin in hadii 4 sano ee uu sii noolaa talada loo dayn lahaa inuusan dalku burbureen, dadkuna aysan muteen ba’a iyo baaba’a ay ka dhaxleen umulo dooxii ka danbeeyay markii Siyaad Barre laga faramaroojiyay xukunka dalka.
22 sano oo Siyaad Barre sii mootanyahay, wali waxaa lala’yahay hogaamiye dadka isu keena, dalkana ku haga hilanka toosan. Siyaasiyiinta iyo indheer-garadkii Soomaaliyeedna waxay u bateen kuwo dalal kale jawaasiis u ah, dadka iyo dalkana ku dibindaabyeeya sandareero yar oo ay ka soo qaateen dalal shisheeye.
Waxaa sidoo kale maanta carrada ka hooseeya oo ciidda hoos maray Cabdullahi Yusuf Axmed oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee kursiga kula dhaga Maxamed Siyaad. Waxaa xusid mudan in Cabdullahi Yusuf laftiisu uu noqday qof kii ugu horeeyay ee Siyaad Barre kadib talada dalka dib ugu celiya Villa Somalia. Qof waliba camalkiisuu aakhiro la tagiyee waxay innaga inaga mudanyihiin inaan dhahno, Rabi ha idiin naxariisto.